Ny hazo 'nofy ratsy alohan'ny krismasy' dia tena ilainao tokoa amin'ny haingon-trano Halloween - iHorror
Home Cool zavatra hovidiana Hazo 'A Nightmare Before Christmas' Hazo no tena ilainao amin'ny haingon-trano Halloween
Hazo 'A Nightmare Before Christmas' Hazo no tena ilainao amin'ny haingon-trano Halloween
by Trey Hilburn III Septambra 22, 2021 348 hevitra
Efa akaiky ny Halloween. Fanampin'izay, tsy lavitra koa ny Krismasy. Ny roa amin'ireo fialantsasatra ireo dia fananan'ny Tim Burton's foana Nofy ratsy alohan'ny Krismasy. Ny olona sasany, aleony toy ny sarimihetsika Halloween ary ny sasany aleony toy ny amin'ny Krismasy. Na izany na tsy izany, ny Nofy ratsy alohan'ny Krismasy Ny hazo dia iray azonao atao amin'ny fety roa na roa.
Ny Bradford Exchange dia amidy amin'izao fotoana izao ilay hazo tongotra 3. Ilay hazo mainty dia mirehitra amin'ny jiro volomparasy ary misy haingon-trano maneho ny tontolon'ny kilasin'i Tim Burton.
Ny famaritana nomena ny Nofy ratsy alohan'ny Krismasy toy izao ny hazo:
Mitondrà fifaliana hafahafa sy macabre kely amin'ny fialantsasatra miaraka amin'ny This Is Halloween Tabletop Tree Collection, a voalohany-of-its-kind Fanontana sanganasa avy amin'ny The Bradford Exchange, Hawthorne Village Division
Nahazo alalana avy any Disney
Jiro! Ny trano Halloween Town feno sary sokitra dia nohazavaina avy ao anatiny, raha ilay takelaka Nightmare Alohan'ny Noely dia misy jiro volomparasy 50 ho an'ny famirapiratana mahatsiravina
Zipo volomparasy volomparasy volomparasy miaraka amin'ny laharana fahatelo
Ity sangan'asa ity dia azo antoka fa hanazava ny haingon-trano Halloween anao, hampiseho ireo tarehin-tsoratra tianao sy toerana tianao indrindra avy amin'ilay sarimihetsika Tim Burton malala, ao anatin'izany ny tranon'i Jack sy Sally, Oogie Boogie, Dr. Finklestein, ny Pumpkin King, ary Cemetery Hill
Ny sary vongana, sarivongana ary firavaka ao amin'ity fanangonana hazo takelaka ity dia asa tanana sy hosodoko amin'ny tanana mba hahazoana ny antsipirian'ny zava-misy ary hitovy amin'ny tany am-boalohany sarimihetsika
Miaraka amin'ny Certificat (iray isaky ny laharana) manamarina ny hazo takelakao, firavaka, sarivongana ary sary sokitra dia avy amin'ny The Bradford Exchange
Mirefy 36 ″ H ny refin'ny hazo; 91.4 cm H; zipo hazo mirefy 24 ″ ny savaivony; 61 sm ny savaivony
Head over to Ny pejy an'ny Bradford Exchange mametraka ny kaontinao raha maharitra ny famatsiana.
Ianao ve mandinika Nofy ratsy alohan'ny Krismasy sarimihetsika Halloween na Krismasy? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.